Mamangy ny isan-tokantrano amin’ny alalan’ireo mpitory ny filazantsara
"Ary, Jesosy niantso ny roa ambin'ny folo lahy hankeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demonia rehetra sy hahasitrana aretina. Ary Izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Ary hoy izy taminy: Aza mitondra zavatra ho amin'ny alehanareo, na tehina, na kitapom-batsy, na mofo, na vola, ary aza misy mitondra akanjo roa. Ary izay trano hidiranareo, dia ao no itoero, ary avy ao indray no ialao" — Lio. 9:1-4.
Miantso ny olony ny Tompo hisahana ireo asa misionera samihafa. Ireo izay mandalo sy mahita ireo lafim-piainana maro dia tokony handre ny hafatry ny filazantsara. Tokony hanao asa fitoriana mitety ny tokatranon'ireo mpiray vodi-rindrina izay tsy mbola nandray ny fahamarinana ankehitriny amin'ny fahafenoany ny mambran'ny fiangonana. Aoka ireo izay misahana izany asa izany hianatra tsy tapaka ny fiainan'i Kristy.
Aoka ho matotra tanteraka izy ireo ka hampiasa ny fahaizany rehetra amin'ny asan'ny Tompo. Hisy vokatra sarobidy avy amin'ny ezaka matotra sy tsy misy fitiavan-tena. Handray ny fanabeazana avo lenta rehetra avy amin'llay Mpampianatra lehibe ireo mpanompo. Fa ireo izay tsy mizara ny fahazavana noraisiny dia hahatsapa, indray andro any, fa hahita fatiantoka mahatsiravina noho ny nataony izy ireo.
Tokony ho maro ny vahoakan'Andriamanitra hitondra boky aman-gazetintsika amin'ny toerana tsy mbola nidiran'ny hafatra mihitsy. Feno varavarana misokatra mahagaga ho an'ny tsara ny asan'ny mpampiely boky avanjelisitra manana fo vonton'ny Fanahy Masina. Ny fitoriana ny fahamarinana amim-pitiavana sy fahatsorana zaraina isan-tokantrano dia mifanaraka amin'ny tari-dalana nomen'i Kristy ny mpianany rehefa naniraka azy ireo voalohany hitory Izy. Maro no tohina amin'ny alalan'ny hira fiderana, vavaka tsotra sy avy amin'ny fo, ary fanehoana ny fahamarinana amin'ny fomba tsotra eo anivon'ny fianakaviana. Manatrika eo handresy lahatra ny fo ny Tompo Andriamanitra. "indro, Izaho momba anareo mandrakariva" no teny fikasany (Mat. 28:20). Noho ny toky avy amin'ny fanatrehan'ny Mpiahy toy izany dia afaka miasa amim-pinoana sy fanantenana ary risi-po isika.
Tokony hotapatapahina ny fahazarana mahamonamonaina eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Tokony hirotsaka an-tsehatra amin'ny asa fanompoana manokana ho an'ny Tompo ny mambran'ny fiangonana rehetra. Aoka ireo miorina tsara amin'ny fahamarinana hamonjy ireo toerana mifanolo-bodirindrina aminy ary hanao fivoriana masina. Aoka hovakina ny Tenin'Andriamanitra, ary hambara amin'ny fomba mora azon'ny rehetra ny famelabelarana. - RH, 5 May 1904.